भारतको भूमी रक्षा गर्दा गोर्खा सैनिकका सम्बुर गुरूङले कस्मिरमा ज्यान गुमाए ! - SandeshMedia.com
महिनावारी हुँदा सहन नसक्ने गरि तल्लो पेट दुखे के गर्ने ? समस्या र घरेल
नायीका स्वस्तिमा भन्छिन् बिहेको भोलिपल्टै श्रीमानसँग एउटै कोठामा जान दिइएन, अझै याद छ त्यो पल !
आठ छात्रामा कारोना संक्रमण, विद्यालय १० दिन बन्द
भारतको भूमी रक्षा गर्दा गोर्खा सैनिकका सम्बुर गुरूङले कस्मिरमा ज्यान गुमाए !
२२ चैत्र २०७७, आईतवार ०५:४१
गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएका नेपालीहरुले भारतको सिमा रक्षा गर्दा अहिले सम्म थुप्रैको ज्या’न गएको छ भारतले सिमा विवाद भएका स्थानमा गोर्खा सैनिकलाई पठाउने गरेको छ । सिमानामा भारतको भूमी रक्षा गर्दा ज्यान गुमाएका नेपालीहरुमा सम्बुर गुरूङको पनि नाम थपिएको छ।उनी गुल्मीका हुन्।पाकिस्तानको सीमा क्षेत्र जम्मु कस्मिरमा ३/८ जिआरमा कार्यरत सम्बुरको सिमानामै ज्यान गएको छ । भारतले पाकिस्तानले गरेको गो’लाबारीमा उनको
ज्या’न गएको दावी गरेको छ । उनको निधनको खबरले गुल्मीमा शोक छाएको छ।भारतीय सेनामा कार्यरत हवल्दार सम्बुर गुरूङले दिनहुँ घरमा फोन गर्थे । उनको श्रीमती बालमाया गुरूङ भने काठमाडौं बस्दै आएकी छन् दिनहुँ जसो श्रीमानसंग उनको कुरा हुनथ्यो। विहिवार पनि उनको श्रीमानसंग कुरा भयो । तर त्यतीबेला श्रीमानले आफु ल’डाइमा जान लागेको कुरा सुनाएका थिएनन्। यु’द्ध विराम भएका कारण उनले पनि ल’डाइको आँकलन गरेका थिएनन् ।
तर शुक्रबार बिहानै अचानक भएको गो’लाबारीमा उनको ज्या’न गयो।सम्बुरको छोरी इलाले बुवासंग बुधवार बिहान कुरा गरेका बताएकी छन् । शुक्रबार बिहान इला सु’तिरहेकै बेलामा फोन आयो । आमा एक्कासी रु’न थालेपछि इलाले थाहा पाइन् बुवा यो संसारमा हुनुहुन्न । उनलाई फोनमा कसैले भन्यो तिम्रो बुबा सहिद हुनुभयो।’ भारतीय सेनामा सम्बुर भर्ती भएको १८ वर्ष पुगेको उनको आफन्तले जनाएका छन्। बुधवार फोनमा कुरा हुँदा अब म दर्शैमा आउछु भनेर भनेका थिए
२८ चैत्र २०७७, शनिबार १४:५७
२७ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०१:४३
२३ चैत्र २०७७, सोमबार १३:१३
२२ चैत्र २०७७, आईतवार ०५:४६
२८ चैत्र २०७७, शनिबार १६:४२
२८ चैत्र २०७७, शनिबार १५:२२